Kirkira lafaa Meeksiikoo: Daa'imman hedduun mana baruumsaa keessatti du'an - BBC News Afaan Oromoo
Kirkira lafaa Meeksiikoo: Daa'imman hedduun mana baruumsaa keessatti du'an
Battala kirkirri lafaa Magniitiyuudii 7.1 Meeksiikoo rukute
Kirkirri lafaa cimaa Meeksiikoo mudate mana baruumsaa tokko qofa keessatti harki caalaan daa'imman kan ta'an namoota 30 ol ajjeese.
Maagnitiyuudii 7.1 kan galmeessise kirkirri lafaa kun, walumaa galatti yoo xiqqaate namoota 225 ajjeesee jira. Magaalaa guddoo biyyattii Meeksikoo Siitii keessatti gamoowwan hedduu fonqolchee, jijjigseera.
Kirkirri lafaa guddaan Meeksiikoo rukute, suurawwan ilaalaa
Balaa kun kan qaqqabe battala namoonni balaan kirkira lafaa ni dhaqqaba jedhanii sodaachuun leenjii akka itti ofeegan ennaa gochaa turanitti. Waggoota 32 duras magaalaa guddoo tanatti lafni kirkirtee namoonni kumaatamatti lakkaa'aman galaafatamaniiru.
Biyyi Meeksiikoo tun kirkirri lafaa yeroo hedduu itti hammaata. Ji'uma kana keessa kirkirri maagnitiyuudii 8.1 galmeeffame, kibba biyyattiitti namoota 90 lubbuu dabarseera.
Magaalaa guddittiitti namoonni miiliyoona 2 ta'an, ifaa fi sarara bilbilaan ala turan. Angawoonnis sararri gaazii dhohuu waan danda'uuf, namoonni daandiirratti tamboo akka hinxuuxne akeekkachiisan.
Kantiibaan Meeksiikoo Siitii, Miguuwel Angel Maanseeraa akka jedhanitti, hojjattoonni yeroo balaa iddoowwan 44tti, gamoowwan jijjiigan waliin wal'aansoorra jiru.
Yoo xinnaate daa'imman 8 fi barsiisaan tokko kibba Meeksiikoo Siitiitti lubbuusaanii dhaban. Gargaarsi lubbuu baraaruu guddaan daa'imman ammas jijjigaa jala jiran bira gahuuf taasifamaa jira. Isaan keessaayis tokko tokko, karaa miidiyaa hawaasaatin namoota dubbisaa jiru.
Goodayyaa suuraa Jigaa mana barnootaa kana jala ammas daa'imman hedduun jiru jedhamee shakkamaa jira
Gamoowwan Meeksikoo Siitiitti jijjigan keessaa: manni jireenyaa abbaa darbii jahaa, supparmaarkeetiifi warshaan keessatti argamu.
Pirezidaant Enrikee Peenaa Niyeetoo ergaa televiziyoonaan dabarsaniin, iddoowwan balaa Kanaan hubaman keessa labsiin yeroo ariifachiisaa labsamuufi raayyaan waraanaas gargaarsaaf qophaa'aa jiraachuu dubbatan.
"Ammas jijjigaa jala namoota argachuu malla. Nu qunnamaa, waan jiru yeroo yewroon isin beeksisnaatii, nu hordofaa," jedhan.
Meeksikoo Siitii keessa, hojjattoonni lubbuu baraaraniifi tola-ooltoonni jijjiigaa keessaa harkaan, akaafaafi waanuma qabaniin soqaa jiru.
Goodayyaa suuraa Tola-ooltonniifi lubbuu baraartonni namoonni lubbuun hafan yoo jiraatan jecha, jijjiigaa jala barbaadu
Umriin 33 kan ta'e, Yuwaan Yesuus Gaarsiyaa "Haati manaakoo achi keessa jirti. Ishee waliin haasa'uu hin dandenye,' gamoo jige cinaa dhaabbachuun, imimmaan bowaa haasa'e.
'Bilbilas deebisaa hinjirtu, isaan ammo waan gaazni yaa'aa jiruuf bilbila keessan cufaa jechaa jiru.''
Meeksikoo Siitiin magaalota addunyaa keessaa, magaalaa namni hedduminaan keessa jiraatudha. Namoonni miiliyoona 20 ol gidduu magaalaa keessa jiraatu.